မိဘနဲ့တူသောအစိုးရ အပိုင်း ( ၁ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » မိဘနဲ့တူသောအစိုးရ အပိုင်း ( ၁ )
မိဘနဲ့တူသောအစိုးရ အပိုင်း ( ၁ )
Posted by intro on Dec 11, 2010 in Community & Society, Creative Writing, Drama, Essays.., Gossip, Rumor | 10 comments
( ရေးသားသူ– မောင်မောင်ဝမ်း)
—- ဘယ်ရှိမလည်း သားရဲ့.. ဦးတို့ဆီမှာ မီးပျက်တယ်ဆိုတာ.. လည်းမရှိဘူး.. အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်ထားတာတို့.. နှေးတာတို့ဆိုတာမရှိဘူး……ကျနော့်တူလေးရဲ့သက်ပြင်းချသံကိုတချက်ကြားလိုက်ရအပြီး သူ့ဘက်က အင်တာနက်လိုင်းက ပြတ်သွားပြန်ပါတယ်။ နောက်တခါ တတူတူနဲ့လှမ်းခေါ်ပြီးစကားဆက်ပြောမယ်ကြံတော့ စကားသံကပြောရလိုက်မရလိုက်နဲ့…… ကျနော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ သူငြီးမယ်ဆိုလည်းငြီးလောက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အခု အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှု့လုပ်ပေးတဲ့ ကုမဏ္ဍီဘယ်နှစ်ခုရှိလည်းမသိဘူး ဒီမှာတော့ ကျနော်တို့မြို့သေးလေးမှာတောင်မှ .. ကုမဏ္ဍီ ၅ ခုအပြိုင်ရှိပါတယ်။ သုံးစွဲရာမှာလည်း စာအုပ်တအုပ်က စာရွှက်တွေကိုလှန်ဖတ်နေသလိုမျိုး မြန်ဆန်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီ ( Liberal Democracy )ကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အနှစ်သာရဟာဒါမျိုးပါ့လားစဉ်းစားနေတုန်း.. တခါ တူလေးဆီကလှမ်းခေါ်သံကြားလို့ လက်ခံနားထောင်လိုက်တော့ စကားနည်းနည်းပြောရပြန်တယ်……
ကျနော့်ရေးသားထားသော “ မိဘနဲ့တူသောအစိုးရ ” ဆောင်းပါးကိုပေးပို့အပ်ပါသည်။ အစဉ်ပြေသလို အသုံးပြုလို့ရပါသည်။ မည်သူမဆိုလွတ်လပ်စွာကူးယူဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
အစိုးရလို့ သုံးနှုန်းနေတာကိုက မဟုတ်သေးဘူးထင်တာပဲ..။
ဒီမိုကရေစီစံနစ်မှာ .. လူတွေက ကိုယ့်အုပ်ချုပ်မဲ့သူကို အများဆန္ဒအရ ရွေးရတယ်..။ အဲဒီရွေးထားတဲ့သူတွေရဲ့ အသုံးစရိတ်တွေကို လူတွေကပဲ .. အခွန်ငွေအဖြစ်နဲ့ပေးကြတယ်..။
ကိုယ်ကရွေးပြီး ကိုယ်ကငွေပေးခိုင်းထားရတဲ့ကိစ္စမှာ… သူက အစိုးရဆိုပြီး အထက်စီးအမည်ကြီးယူထား(ရထား)ဖို့မသင့်တော်ဘူးထင်တာပါပဲ..။
နောင်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ ..“အစိုးရ”ကို .. “လူထုကျွန်”လို့ကို နာမ်နှိမ်အမည်ပေးသင့်တယ်ထင်မိပါတယ်..။
အဲဒါမှ … လူထုကိုအလုပ်အကြွေးပြုချင်တဲ့ကျွန်စိတ်ဝင်လာကြမှာ…။
အခုကတော့..အစိုးရတောင်မှ… မိဘနဲ့တူတဲ့အစိုးရဆိုတော့ … အင်း..။
ထားပါလေ..ဒီလိုမှမဟုတ်လဲ.. မရေးလဲ.. သူက (အစိုးရဆိုသူများက) ဖနောက်နဲ့လာပေါက်… ခံရယုံရှိတာမို့ …ဆက်တင်ပါလေ..။ဆက်ဖတ်ပါ့မယ်..။
ဒါကတော့ ကျွန်တော့် Inbox ထဲကို ၀င်လာတဲ့ Mail ကနေ ဖတ်မိပြီး မူရင်းစာရေးသူရဲ့ ခွင့်ပြုချက်လဲ ရလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ… US က လူနေမှု အဆင့်အတန်း၊ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားအကြောင်းကို သိတ်နားမလည်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒီ ဆောင်းပါးလေးထဲကအတိုင်း တကယ်လား ဆိုတာကို သိချင်မိတာက တစ်ကြောင်းရယ်… US က လူ့အခွင့်အရေးတွေက ဒီအတိုင်းတကယ်လား ဆိုတာကိုလဲ သိချင်မိလို့ပါ… ကျွန်တော်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပါ… လက်ရှိလဲ မြန်မာပြည်ထဲမှာပဲ နေထိုင်ပါတယ်… နိုင်ငံရေးကိုတော့ သိတ်ဝါသနာ မပါပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ လူတန်းစားကတော့ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် လိုလိုချင်ချင် တင်မြှောက်ထားတာ ဟုတ်လား မဟုတ်လား သူတို့ကိုယ်တိုင် အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ… ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ internet သုံးရတာ ဈေးကြီးပေးပြီး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ကော်နက်ရှင်ပဲ ရတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြပါတယ်… ခဏခဏ လိုင်းနှေးတာ၊ ပြတ်တာတွေလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်… Phone သုံးရင်လဲ Sim Card တစ်ခုကို ဈေးကြီးပေး ၀ယ်ရပါတယ်… ဒါတောင် ကန့်သတ်ချက်တွေ အမျိုးမျိုး ရှိနေပါသေးတယ်… ကားဝယ်စီးချင်ရင်လဲ Model အဟောင်းတွေကို ဈေးကြီးပေးပြီး ၀ယ်စီးရပါတယ်… လူထု အများစုကလဲ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စား ဆိုတဲ့ ဘ၀တွေ အများကြီးပါ… အလုပ်မလုပ်နိုင်ရင် ထမင်းမှန်မှန်စားရဖို့က မသေချာပါ… ဒါက ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသား အားလုံးလဲ သိကြပါတယ်… ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ၀န်ခံရရင် အထက်ဆောင်းပါးပါ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားတစ်ရပ်သာ ကျွန်တော်တို့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ရင်၊ မိမိလိုချင်တာကို မိမိတောင်းဆိုခွင့် (ရသင့်ရထိုက်သော အခွင့်အရေးကို ဆိုလိုပါသည်) ရခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီနိုင်ငံမှာ လူဖြစ်ခွင့်ရတာ ကံအကောင်းဆုံးလို့ ထင်မြင်မိမှာပါ…
မူရင်းစာရေးသူရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရထားတယ်ဆိုရင် ဆက်တင်ပါခင်ဗျား..။
ယေဘူယခြုံပြောရင်တော့ …အပေါ်ကေ၇းထားတဲ့ အခွင့်အေ၇းတွေက .ယူအက်စ်မှာတကယ်ရပါတယ်..။
ယုအက်စ်မှ မဟုတ်ပါဘူး..။ ဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေအားလုံးလိုလို အဲဒီလိုရကြပါတယ်..။ ရအောင်လည်း အဲဒီဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ လူထုတွေက ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြကြိုးစားခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်ပါလား..။
မြန်မာလူထုကလည်း ထိုင်မနေပဲ..တတ်နိုင်သလောက်..ကြိုးစားပြုပြင်နေကြတယ်ဆိုတာ ..အသိသာကြီးပါ..။
အခုစာကို ဝေဖန်ပြောတာက ..ယူအက်စ်နဲ့နှိုင်းပြောသလိုဖြစ်နေတာမို့… စာတင်သူစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေလိုပါ..။
အချက်အလက်ကိုသာ ဝေဖန်ဆန်းစစ်ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်..။ အဲဒီလိုနဲ့… အဖြေလေးတွေထွက်လာမှာမဟုတ်ပါလားနော..။
ဒီနိုင်ငံမှာတော့ နိုင်ငံသား လူတစ်ယောက်ခြင်းဆီကနေ ၀င်ငွေခွန်ကောက်တာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်သိပ်မရှိပါဘူး။
တိတိကျကျ ဖြတ်တာလဲ မတွေ့ပါဘူး။
အဲဒီနိုင်ငံမှရော နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီကနေ ၀င်ငွေခွန်ဘယ်လိုဖြတ်လိုက်တယ် ဖြတ်လိုက်တဲ့ငွေကို ဘယ်လိုအသုံးချတယ်ဆိုတာကို ဗဟုသုတရအောင် သိသူက တင်ပေးစေလိုပါတယ်။
ကျနော်ပို့တဲ့စာရော ရပါသလား ကိုကိုကိုင်ရေ
သူ့ဖြတ်တာတွေကရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပါပဲ..။ ၀င်ငွေကို .. ပြည်နယ်။ ဖယ်ဒ၇ယ် အခွန်ဆိုပြီးဖြတ်တယ်.။
ပစ္စည်းဝယ်တိုင်းလည်း .. ၁၀ရာနှုန်းလောက် ထပ်ဖြတ်တယ်..။
စာရင်းချုပ်တော့ .. ၁၀၀ မှာ ၄-၅ဆယ်လောက် အသာလေး ယူသွားတာပါ..။
ဆိုတော့.. အခုလို မန်းလေးဂေဇက်က .. မြန်မာပြည်ကို ငွေပြန်ထုတ်ပေးရင်.. ကရ်ှဒေါ်လာ ၁၀၀ ဆိုတာ အခွန်ဆောင်ပြီးငွေဖြစ်တာမို့ .. တကယ်က.. ၁၅၀လောက်အသာလေးတန်တဲ့ငွေပေါ့..(ဤကားစကားချပ် )
် ဖြတ်လိုက်တဲ့ငွေကို ဘယ်လိုအသုံးချတယ်ဆိုတော့ .. အိုဘားမားအစိုးရက ..လွှတ်တော်ကို တနှစ်ကြိုပြီး သုံးမဲ့ဘက်ဂျက်ငွေတင်ရပါတယ်..။အဲဒီမှာ .. ၂၀၁၁ သူဘယ်လိုသုံးမလဲ အသေးစိတ်ပါတယ်..။
အမတ်တွေက ..၀ိုင်းခုတ်ထစ်ဖြတ်တောက်ပေးကြတယ်ပေါ့..။ အဲဒီမှာ ကျန်တာသုံးပဲ..။
(တက်လာမဲ့ မြန်မာအစိုးရတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲမသိ .. အခုထိရှိနေတဲ့ စစ်တပ်ကတော့ ..တိုင်းပြည်ဘက်ဂျက်.. မပြရေးချ မပြ)
စူစုပေါင်း. ထရီလီယန် ၃.၅၁၈ရှိတယ်ဗျ..။ သန်းထောင်ပေါင်း ၃ထောင်၅ရာပေါ့..။
ဘယ်လိုသုံးမလဲအကြမ်းတော့ ..အောက်ကလင့်မှာကြည့်ဗျို့ ..။
အနှစ်သာရအားဖြင့် အရည်အချင်းပြည့်မီဖို့နဲ့ ဖြောင့်မတ်ဖို့လိုပါတယ်။
နောက် စနစ်၊ လူမူဖူလုံရေးစနစ်ကစလို့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ကို ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာ
ဒါမှ အစိုးရဆိုတဲ့ မောင်းနှင်သူတွေ လမ်းမချော်နိုင်မှာပါ။
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ… ပြီးတော့ ကြားဖူးတာ ရှိတယ်… နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဟာ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ဆေးရုံတက်ရတယ်ဆိုရင် ဆေးရုံ၊ ဆေးဖိုးက Free ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား? ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘူး၊ ပိုက်ဆံမရှိရင် ဆေးရုံတက်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး၊ ကိုယ်သုံးမယ့်ဆေး ကိုယ်တိုင်ဝယ်ရတာပါပဲ၊ စရိတ်မျှပေးဆိုပေမယ့်လဲ အခမဲ့တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကို kai တို့ US မှာရော အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဆေးရုံတက်ရရင် ဘယ်လိုပေးရပါသလဲ? အခမဲ့လား? အချိန်ရရင် ဖြေပေးစေလိုပါတယ်… သိတဲ့လူတွေ ရှိရင်လဲ ၀င်ပြီး ဖြေပေးစေလိုပါတယ်…
ယူအက်စ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေ အများအားဖြင့် ကျမ်းမာရေးအာမခံဝယ်ထားကြပါတယ်..။
မ၀ယ်ထားရင် ဆေးရုံတက်ရတယ်ဆိုရင် ဆေးရုံ၊ ဆေးဖိုး၊ ဆ၇ာဝန်ဖိုးမပေးနိုင်ပါဘူး..။
အဲဒီတော့ ..အစိုးရက ၀င်စိုက်ပေးတာပေါ့..။
အစိုးရကို ပြန်ဆပ်ရမယ်ပေါ့..။ မဆပ်နိုင်ရင် ..ဒေ၀ါလီခံလိုက်ယုံပါပဲ..။